Mhedzisiro yekudyara kwehurumende nyowani muItari | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, mashura akashata mumisika yemari agara muItari. Semhedzisiro yehurumende nyowani ichaumbwa pakati peiyo 5 Star Movement neLa Liga. Kusvika padanho rekuti njodzi yekuremekedza zvine chekuita neGerman yasvika pamapoinzi zana nemakumi masere neshanu uye musiyano uripakati peiyo inobhadharwa neRoma neMadrid inosvika pakakwirira mumakore matanhatu. Chero zvazvingaitika, chinhu chimwe chiri pachena uye ndechekuti iyi nyowani yezvematongerwo enyika inogona kukanganisa yako investments kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete maererano neiyo equities, asiwo yakagadziriswa mari uye kunyangwe dzimwe nzira dzekudyara.
Mamiriro ezvinhu aripo anouya panguva ino hupenyu hwematongerwo enyika muItari hunogona kuratidza zvakanyanya pane zvaunodyara. Zvirinani sekusvika iko pfupi uye kusvika padanho rekuti inogona kukuita kuti urasikirwe kana kuwana mari zvichienderana nezano rauchazoshandisa kubva ikozvino. Imwe yekutanga mhedzisiro yainogona kuve iri mumisika yemari. Sezviri kuitika mazuva ano, kunyangwe hazvo mafambiro acho asiri kunyanyisa, sezvakatarisirwa kubva pakutanga nevamiriri vakasiyana nevamiriri vezvemari.
Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa izvozvo hupfumi hweItari ndewechitatu yeEuropean Union uye zvese zvinoitika mairi zvinogona kuve nemhedzisiro uye nekukurumidza kune veSpanish. Kupindirana-kwayo kuzvimiririra kwakanyanya uye zvese zvinoitika mumisika yeItaly pakupedzisira inoenda kune dzenyika. Kune rimwe divi, mhedzisiro yainogona kuve nayo kumasangano enharaunda yakakosha zvakare uye unofanirwa kuyananisa mashandiro ako kuitira kuti mipiro yezvehupfumi yaunoshandisa kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva izvozvi kusachinja.
1 Zvinoitika muItaly zvinokubata sei?
2 Kuderera kwekufamba mumusika wemasheya
3 Zviitiko mumusika wemari
4 Yakagadziriswa mari: vanotambura zvakanyanya
5 Tsvaga dzimwe mhando
6 Kuisa mari mumafuta
Zvinoitika muItaly zvinokubata sei?
Izvo ndezve hurumende isingafarire misika yemari uye nekudaro mhinduro yavo haigone kuve chero chinhu chakanaka, sezvo zvine musoro kunzwisisa. Imwe yemisika yemari yakanyanya kukanganiswa hapana mubvunzo musika wekutengesa. Mazuva ano chiItaly ndicho chakanyanya kurangwa kune ese indexes ekare kondinendi. Nekuderera kwekutenderedza 1%. Nezve iyo Spanish equity index, iyo Ibex 35, mafambiro acho haana kunyatso kucherechedzwa mumazuva ano ekupokana pakati pevamiriri vemari. Uye yakangopa chete mashoma muzana mapoinzi.
Kunyangwe hazvo zvakaipisisa pamisika yemasheya inogona kuuya mumazuva mashoma anotevera kana mavhiki uye zvichienderana nechirongwa icho mutungamiriri mutsva weItari ari kushandisa. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuve uchiziva kwazvo zvese zvinoitika muchikamu chino cheEurope. Iko kukosha kwezvikamu zvemari nemabhangi zvakajairika zvinogona kukuvadza zvakanyanya nezvirongwa zvezvematongerwo enyika zvakagadziriswa nehurumende yeMovimiento 5 Estrellas neLa Liga. Haisi kuraswa madonhwe muhomwe yeimwe yakadzika iyo inogona kutora maeuro mazhinji munzira kana iwe ukavhura zvinzvimbo mumusika wemasheya mazuva ano.
Kuderera kwekufamba mumusika wemasheya
Ehezve, ndiyo mamiriro anogona kutarisirwa kana mapato maviri ezvematongerwo enyika akashandisa chirongwa chavo kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, zvichave zvakakodzera tarisa kureba kwayo uye kusimba kuyera kana zvakafanira kuisa njodzi kuvhura zvinzvimbo mumisika yemari iyi. Beyond technical technical iyo mabhegi aripo panguva ino chaiyo. Kurudziro inobatsira mazuva ano ndeyekugara kure nemisika kuti uongorore kuti shanduko yavo ndeipi kubva ikozvino.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora ndechekuti iyo volatility ichawedzera zvakanyanya zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi. Nemusiyano wakakura pakati pemitengo yepamusoro uye yepasi uye kuti kana zvichigona kunakidza kuita mabasa ekutengesa. Nekudaro, iwe unozofanirwa kuunza yakawanda ruzivo mukirasi yemamiriro ezvinhu kuitira kuti mashandiro agadziriswe zvinobudirira kupfuura pane dzimwe nguva. Hazvishamisi kuti izvo zvinotaurwa nevamwe vevanoongorora zvemari vane mukurumbira ndezvekuti iwe unogona kurasikirwa zvakanyanya kupfuura kuwana nekuvhura nzvimbo mazuva ano. Usakanganwa kana iwe usiri kuda zvisina kunaka kushamisika usati watanga zororo rako.
Zviitiko mumusika wemari
Ehezve, imwe yeanonyanya kushupika mari yemari kune ino hurumende kuumbwa muItari imari. Kusvika pakuti imwe yeanonyanya kufamba mazuva ano. Kunyanya, zvine chekuita neshanduko yakananga pakati peUS dollar uye euro. Nemafambiro anokurumidza kwazvo ari kushandiswa nevanofungidzira kuti vawane purofiti yakakura mukushanda kwavo mumisika yemari. Hazvishamisi kuti simba remari yeUnited States iri kuve rimwe remasangano akajairika mazuva ano uye nhau dzezvinoitika muItaly.
Mune imwe tsinga, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti uyu musika wakasarudzika wezvemari wakajairika kuti iwe ugone kuwana mari yakawanda munguva pfupi pfupi yenguva. Nenjodzi mukushanda kunogara kuri latent. Kusvika pakuti iwo haasi mafambiro akakodzera kune ese ma profiles revashambadzi vadiki nepakati. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuve neruzivo rwakakura murudzi urwu rwekushanda mumari dzenyika dzese. Zvisinei nebasa rayo rakakura mazuva ano uye kunyanya zvine chekuita neiyo euro.
Yakagadziriswa mari: vanotambura zvakanyanya
Asi hapana mubvunzo kuti misika yemari yakatarwa ndiyo yakanyanya kukanganiswa nekusagadzikana kuri munyika yeLatin. Hazvishamise kuti purofiti yeiyo vocha yeitaly chakwira kudenga mazuva ano. Kusvika padanho rekuti iri kuve nekukanganisa pundutso rwezvipenga zvisungo. Izvi mukuita zvinoreva kuti mari yekudyara yeaya maficha iri kurasikirwa nemakwikwi sezvo ivo vachitambura zvakanyanya kubva parudzi urwu rwekufamba mumisika yemari. Muchiitiko ichi, hapazove nesarudzo kunze kwekutiza kubva kune yakatarwa mari yekudyara mari inowanikwa munyika dzepanyika. Iko Italy ndeimwe yeanonyanya kusarudza anotarisa.
Iri kirasi remari inowirirana iri kudzikira nekusimba kukuru. Iine zvimwe zvisina kunaka zvikamu zvinopfuura izvo zvemari inoshanduka yemari yekudyara. Mupfungwa iyi, zvakachengeteka kuisa chinzvimbo mumusika wemasheya pane kuwana mari yakatarwa panguva ino. Uye zvakare, mazhinji eaya zvigadzirwa zvemari ari inosanganiswa neimwe midziyo yemari izvo zvinogona kufadza izvo zvinogona kurasikirwa izvo zvinogona kugadzirwa munzvimbo dzako. Iwe haugone kukanganwa kuti mari yekudyara yehunhu izvi ndeimwe yeakakundikana zvikuru ezvingaitika muItari kubva zvino zvichienda mberi.
Zvakanaka, kupihwa iyi yakaoma mamiriro, hazvitongwe kuti iwe unosarudza nhevedzano yemari dzinoonekwa senge dzimwe nzira. Kusvika pamwero wekuti ivo vanogona kuita sehunhu hwekupotera mune ino mamiriro ezvematongerwo enyika akagadzirwa mukati meEuropean common space scenario. Imwe yacho inomiririrwa nesimbi yakakosha par kugona, senge ndarama. Uye zvakare, inopfuura neinonakidza tekinoroji mamiriro kuti aongorore pakuvhura kwenzvimbo. Hazvishamisi kuti ine inonakidza yekuongorora mikana iwe yaunogona kutora mukana izvozvi.
Imwe sarudzo iwe yaunofanira kugadzirisa dutu iri munyika yakavakidzana inovezwa kuburikidza ne kusagadzikana-kwakavakirwa mutual mari. Nekuti ivo vanogona kutora mukana wechiitiko chisina kunaka kumisika yemari. Kunyangwe uine muganho mukupera kwenzvimbo sezvo iwe uchimisa njodzi yekuzvimisa, sevashambadzi vadiki nepakati vanopokana mudhizaoni yavo. Nguva imwe neimwe mamaneja paanogadzira mari yeaya maitiro uye ayo anotengeswa pasi penzvimbo dzakasiyana dzebatsiro uye wadii wazvitaura, zvakare sedanho rekudyara.
Kuisa mari mumafuta
Chekupedzisira, pane zvakare sosi yekuvhura nzvimbo munzvimbo dzakasarudzika senge oiri pachayo, iri kuvandudza rally yakasimba kwazvo. Nemutengo uri pedyo nemakumi masere emadhora dhiramu. Uye kuti iwe unogona kuvhura zvinzvimbo kuburikidza nemakambani emafuta ayo akanyorwa pane akasiyana epasi rese masheya indices. Kusvika padanho rekuti inogona kunge iri yeimwe yetsika dzakakurudzirwa yegore rino razvino. Semuyenzaniso, Repsol iyo inosanganisirwa muSpanish equities.
Chero zvazvingaitika, ndeimwe yesarudzo inobatsira kwazvo kana iwe uchida kuita kuti mari ichengetwe mukutarisana nemhirizhonga yezvematongerwo enyika nevemagariro inogona kugadzirwa munyika ino yakakosha yeEurope. Hazvishamise kuti purofiti iyo iri kupihwa nemari yezvemari panguva ino iri mumadhijiti maviri. Chinhu chisina kupihwa nemamwe marudzi emari, kunyangwe iwo musika wemasheya zvachose. Kunyangwe chakaipisisa pane zvese ndechekuti zvinogona kunonoka kupinda munzvimbo dzavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mhedzisiro yekudyara kwehurumende nyowani muItaly
Ndingaite sei kuti ndizive kana ndine pasi pechikamu?